नवलपरासीमा आफ्नै मामाले भगाए पन्ध्र बर्षिय भान्जी! छोरीले पोइ खोजी हामीलाई खोज्ने ठेक्का छैन (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > नवलपरासीमा आफ्नै मामाले भगाए पन्ध्र बर्षिय भान्जी! छोरीले पोइ खोजी हामीलाई खोज्ने ठेक्का छैन (भिडियो)
admin November 8, 2020 November 8, 2020 भिडियो, समाज	0
श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन अनेक उपाय अपनाइन्छन् । विश्वका अधिकांश देशमा पुरुष प्रधान नै हाबी छ। दम्पत्ती बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन महिला पुरूष दुवैको उत्तिकै महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । दुबैले धेरै विषयमा सम्झौता गरेर अघि बढ्दा नै दाम्पत्य जीवन सफल हुन्छ।
त्यसमा पनि श्रीमतीले अझ बढी सम्झौता गर्नुपर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । पछिल्लो एक अनुसन्धानबाट सार्वजनिक भएको निष्कर्ष अनुसार श्रीमानलाइ खुशी बनाउन साथै श्रीमानका अगाडि श्रीमतीले गर्नु नहुने २० बुँदा यहाँ प्रस्तुत गरेका छाै । समाचारकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***
जीतकाे खुशी साट्नै लागेका बेला कार दुर्घटनामा गुमाएका श्रीमति र छोरी सम्झेर भावुक बने!